Ra’iisul Wasaare Khayre: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiqii saxda ahaa ee dib-u-dhiska” – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray December 5, 2017 January 19, 2018
Ra’iisul Wasaare Khayre: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiqii saxda ahaa ee dib-u-dhiska”
MUQDISHO — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa bogaadiyey taageerada iyo mashaariicda horumarineed ee dawladda Mareykanku ay la garab taagan tahay Soomaaliya. Kadib heshiis horumarineed oo ay kala saxiixdeen Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Hay’adda USAID kaasoo ku kacaya lacag dhan 300 Milyan oo Dollar.
“Maanta waa maalin kale oo macne ku yeelan doonta mustaqbalka, dawladnimada, nabadda iyo horumarinta Soomaaliya, waxaan uga mahadcelinayaa dawladaha aan saaxiibada nahay taageerada ay la garab taagan yihiin dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
“Soomaaliya waxaa ay ku socotaa dariiqii saxda ahaa ee dib-u-dhiska, waxaan leenahay hay’ado shaqeynaya oo adduunku kalsooni ku qabo diyaarna u ah isla-xisaabtan iyo daah-furnaan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Qormadii HoreHore Munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka Xukuumada oo Muqdisho lagu qabtay & RW Khayre oo ka qeyb galay
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Khayre oo sheegay in horumar laga sameeyey amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka